How Secure is your WiFi Router? | वाइफाइ राउटर कति सुरक्षित ? – Subas Niraula
हामीले नयाँ वाइफाइ राउटर किन्दा कहिले पनि शक्तिशाली नेटवर्क सुरक्षाबारे ध्यान दिँदैनौं । खासगरी घरमा जोड्ने राउटर भनेपछि हामी केवल त्यसको स्पिड र कभर गर्ने एरियाका बारेमात्रै ध्यान दिन्छौं ।अब भने हामीले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ । नेटवर्क सुरक्षा शक्तिशाली हुन किन जरुरी छ भने त्यो नै हाम्रो इन्टरनेटमा प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार हो । यदि सुरक्षा प्रणाली राम्रो नभएकै कारण राउटरमा नचाहिंँदो सफ्टवेयरले प्रवेश पायो भने हाम्रो मोबाइल फोन, कम्प्युटर, स्मार्ट वाच, टिभी लगायतका घरेलु उपकरणहरू त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा साइबर थ्रेटबाट बच्नका लागि आफूले प्रयोग गर्ने नेटवर्क सुरक्षित हुन अत्यन्तै जरुरी भएको छ । राउटरलाई सुरक्षित बनाउने सरल उपाय भनेको त्यसको समय समयमा ‘Firmware’(उक्त राउटर चलाउनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयर) लाई अपडेट गरिरहनु हो, त्यसरी नै जसरी हामी हाम्रो मोबाइललाई अप–टु–डेट राख्न अपडेटहरू गरिरहन्छौं ।
राउटरको ‘फ्रिमवेयर’ अपडेट कसरी गर्ने:
सुरुमा त्यो राउटरको इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल हेरेर त्यसको आईपी एड्रेस पत्ता लगाउने । त्यो आईपी एड्रेसलाई इन्टरनेट ब्राउजरको वेबसाइट खोल्ने स्थानमा लेख्ने । यसरी हामी राउटरको वेब ड्यासबोर्डमा पुग्छौं ।
उक्त ड्यासबोर्डमा युजरनेम र पासवर्ड राखेर खोल्ने । त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरिसकेपछि फ्रिमवेयर सेटिङ्समा जाने र नयाँ फ्रिमवेयरको खोजीका लागि भनेर राखिएको बटनलाई क्लिक गर्ने ।
यदि उक्त राउटर बनाउने कम्पनीले नयाँ अपडेट दिएको छ भने त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने र राउटरलाई रि–स्टार्ट गर्ने । यही प्रक्रियालाई हरेक ३ देखि ६ महिनामा पुन: दोहोर्‍याउने ।
राउटरको युजरनेम र पासवर्ड नौलो प्रकारको राख्ने ।
आफ्नो राउटरलाई केही वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन गर्ने ।
जब हामी माथि उल्लेखित विधिबाट राउटरको ड्यासबोर्डमा राउटरको युजरनेम र पासवर्ड हाल्ने स्थानमा पुग्छौं, धेरै जसोको युजरनेम ‘admin’ हुन्छ र पासवर्ड कित ‘passw0rd’ नै लेखिएको हुन्छ वा ‘1234’। यदि यस्तो युजरनेम र पासवर्ड छ भने तपाईंको राउटर सधैं असुरक्षित हुन्छ । किनभने यस्तो युजरनेम र पासवर्ड भएका राउटरको कभरेज एरियामा पर्ने जोकोहीले पनि सजिलै त्यसमा प्रवेश गरेर सेटिङ्सहरू परिवर्तन गरिदिन सक्छ र त्यसलाई अन्यत्रबाट पनि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने बनाइदिन सक्छ ।राउटरले राम्रोसँग काम गरिरहे पनि त्यसलाई केही वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन गर्नु राम्रो र सुरक्षित हुन्छ । कम्पनीले समय–समयमा निकाल्ने अपडेटहरू सबै राउटरका लागि हुन्छन् भन्ने केही जरुरी छैन । केही समय पहिलाका राउटरहरूका लागि उत्पादकहरूले अपडेटहरू नबनाउने हुँदा समय–समयमा राउटर फेर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । राउटर फेर्ने बेला भयो कि भएन भनेर थाह पाउन उक्त राउटर कम्पनीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ । यदि कम्पनीले गएको वर्षदेखि नै फ्रिमवेयर अपडेट प्रदान गरेको छैन भने उक्त मोडलको राउटर कम्पनीले बनाउन बन्द गर्‍यो भन्ने बुझिन्छ । अब त्यस राउटरलाई परिवर्तन गर्नु नै सुरक्षित हुन्छ ।
Tags: HackingHow Secure is your WiFi Router?how to be safe from hackingWiFi Router SecurityWiFi Securityवाइफाइ राउटर कति सुरक्षित ?